Indlela yokupheka ngokushesha isidlo sesibili senyama
Indlu yasekhaya Ukupheka Izifundo ezimbili I-Goulash
Esihlokweni esithi "Indlela yokupheka izifundo zesibili zenyama" sizokutshela ukuthi izitsha zenyama zingapheka. Akukho lutho okumelwe lwenziwe, kepha ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi isidlo asilungele, umuntu akakwazi ukubona ngaphambili umsebenzi wakhe, ngoba usuku olulodwa olungasebenzi. Ngifika ekhaya ngaphambi kokuba kufika umyeni wami, futhi ngokushesha wangena ekhishini. Ngibheka esiqandisini, ukuthi iqukethe: ucezu lwenyama, izaqathe, anyanisi, izinsalela zika-tomato sauce kanye nokunye okufana nokolweni. Konke kuhle! Lesi sidlo sisejubane lokulungiselela okusheshayo, ngibiza ngokuthi "umyeni wami emngceleni." Ilungiswe ngokushesha kakhulu, ngalesi sikhathi umyeni unesikhathi sokubuyela ekhaya, ushintshe izingubo, kuthatha imizuzu eyishumi
Sithatha ama-350 amagremu wenkomo efriziwe, i-defrost ku-microwave, kanti i-buckwheat ihlanzwa. Ngalesi sikhathi i-kettle kagesi inesikhathi sokubilisa. Gcwalisa amabhakede, imizuzu engu-10 efakwa kuhhavini ye-microwave, ngokugcwele. Sithatha u-anyanisi, sihlanze futhi sikhanyise u-anyanisi, ngenkathi i-pan yokudoba ivutha, bese uthele i-anyanisi epanini lokuthosa. Ama-anyanisi athosiwe epanini lokuthosa futhi ku-grater enkulu sikhipha ama-carrot, ngezinye izikhathi pepper enhle inganezelwa kuwo. Ama-karoti angena epanini lokuthosa ama-anyanisi.
Ngenkathi imifino ihlosiwe phezu komlilo omkhulu, ihlale ixutshwe, inqamule izintambo bese ibamba inyama. Siyifaka emifinini, ngezingxenye ezincane, ukuze inyama inganiki ijusi futhi inesikhathi sokuklolodela, khona-ke ngeke kube khona isikhumba. Konke kuhlanganiswe njalo. Sifaka isipuni se-slide se-tomato unamathisele, i-dill. Engeza i-parsley, usawoti kanye nopelepele, gxuma bese ufaka isipuni esingu-1 sofulawa, ngokushesha gazinga, uthele egumbini lamanzi abandayo, ugxilise ukuvimbela izigaxa. Ngemuva kwemizuzu embalwa, i-sauce ishisa, sisusa i-pan yokuthosa kusuka epulatifeni, futhi ngaleso sikhathi ibhakede lezinhlamvu liphekwe ku-microwave. Zonke i-goulash ilungile. Inyama iphenduke kahle futhi ithambile, ungasebenzisa amakhambi ahlukene.
Indoda idinga ukondliwa ngenyama futhi amadoda amaningi avumelana nalokhu, ngaphandle uma bengabelimi bemifino. Ungakwazi ukupheka izitsha eziningi kusuka encekeni efanayo yenyama. Ngeshwa, emva komsebenzi akukho sikhathi sokuthokozeka okuhlukene, ngakho-ke udinga ukupheka kalula futhi masinyane. Sinikeza izitsha ezilula zenyama ezingadingi amakhono akhethekile namakhono.
Izithako: 300 amagremu yengulube, i-garlic, i-pepper, usawoti ukunambitha, izipuni ezintathu zefulawa.
Izithako ze-batter: amaqanda angu-1 noma amabili, izipuni ezintathu zikafulawa, izipuni ezimbili zosawoti omuncu, ½ inkomishi yobisi. Konke okuxutshwe kahle, ukwenza inhlama ibe yilamanzi amancane, cishe njengama-pancake.
Ukulungiselela. Sinquma inyama ngapha nangapha, sishaya, siwasawoti, i-peppered, roll in garlic egayiwe, iphenduke ngamabhubhu amancane. Ziphathwe nge-batter futhi gazinga emafutheni ashisayo emifino.
Inyama ngaphansi kwesigqoko
Izithako: amafutha wezipuni ama-3, ama-gramu angu-500 enyama, anyanisi ophakathi, ama-topoon 3, i-basil, i-pepper, usawoti ukunambitha.
Ukulungiselela. I-fat fat fat (i-veal, inyama yenkomo encane noma ingulube), siyasiphuza ngaphansi kwamanzi abandayo, yiyeke ibuye ibe yizicucu, kungcono ukusika izintambo. Njengoba sincane kakhulu ngangokunokwenzeka, singakwazi ukusila, ukwengeza izinongo. Ezingxenyeni zombili, gazinga kuze kube sekupheleni, ukuthi isikhumba esincane sakhiwe, kodwa inyama yayinzima kakhulu, hhayi eqediwe ngokuphelele.
Fry epanini elikhulu lokuthosa nesibambo esithintekayo noma ngaphandle kwesibambo, lokhu kuqinisekisa ukuthi ngaphambi kokuba uthumele izitsha kuhhavini, akudingeki ususe kusuka epanini ukuya kwesinye isidlo.
Ngakolunye uhlangothi we-chopper esiholela ngokufaka isiphotho segolide, sinqunywe ngemichilo noma amasongo, gcoba nge-imayonnaise bese ufafaza ushizi ogayiwe. Uma uthanda, phakathi kweshizi no-anyanisi, engeza umbuthano omncane wezotamatisi, amakhowe ambalwa aqoshiwe, noma into enhle, konke kuxhomeke emcabangweni wakho, futhi ngoba kukhona okwamanje esiqandisini.
Okuphezulu nge ushizi, yenza isikhwama esinjalo, "ukugxila" ngale ndlela, ngeke kubonakale, futhi kuyoba ukumangaza ekhaya. Lokhu kungenziwa uma inyama singayisusi i-pan, udinga nje ukubheka ushizi kusengaphambili bese ugcwalisa. Kodwa awudingi ukulibazisa yonke inqubo yokufafaza ushizi, inyama, ethathwe emlilweni akufanele ibe nesikhathi sokubamba wonke amafutha futhi ube nesikhathi sokupholisa phansi. Khona-ke inyama iyabuyela emlilweni futhi ihanjiswe kuhhavini kuze kuphekwe. Kuzothatha imizuzu engu-10 noma engu-15 ekushiseni kwama-100 noma ama-150 degrees.
I-cutlets evela enkomeni eqoshiwe
Izithako: amagremu angama-200 amafutha wezinso, ama-gramu angu-800 yenkomo yenkomo, 1/3 indebe yobisi, izingcezu ezingu-3 zesinkwa esimhlophe, amaqanda amabili, amagremu angu-100 webhotela, ingilazi ye-breadcrumbs, pepper, usawoti ukunambitha.
Ukulungiselela. Izilwane ezilungisiwe nenyama ake sihambe nge-grinder yenyama. E-bhotela, gazinga u-anyanisi oqoshiwe, wengeze ekugxotsheni, pepper, usawoti bese uvumele uphinde uphinde udlule nge-grinder yenyama. Sifaka isinkwa, sigxilwe ubisi, siphuze ubisi futhi sizokugcoba inyama enobisi kuze kube nzima.
Beka i-mincemeat ebhodini lokusika, elimanzi ngamanzi, lahlukanisa zibe izingcezu ezincane. Ngosizo lommese, senza amaqebelengwane amancane ama-indentations amancane phakathi. Emgodini ngamunye sibeka ibhotela elicibilikile noma epasipuni lomhluzi. Emaphethelweni ekhekhe ehlanganiswe emvilophini futhi anikeze ukuma kwe-cutlets.
Sifaka ama-cutlets emaqanda nasezinkwa zezinkwa, bese udosa epanini lokuthosa nebhotela. Fry kuqala ugoqwe phansi. Sizonquma ukulungiswa kwe-cutlet uma sicindezela ngomese. Uma ijusi lilula, liphekwe. Ukusika izihlahla, amazambane aqoshiwe, amazambane othosiwe noma iklabishi ekhanda. Kutholakala izinhlanzi ezinomsoco, uma esikhundleni sesinkwa sidinga imifino eluhlaza, isibonelo, anyanisi, izaqathe.
Ukudla ku-apula puree
Izithako: 500 amagremu kwanoma iyiphi inyama (kangcono kunengulube encane), 1 noma 2 apula omuncu, pepper, ushukela, usawoti ukunambitha.
Izithako zamazambane ezigcotshwe: ingilazi ye-cranberries, ama-apula amabili, ushukela.
Ukulungiselela. Thatha ingulube ngaphandle kwethambo noma ingulube ye-ngulube isuke ibe yizicucu, amagremu angama-100 noma angu-150 ngalinye, umumo onxantathu. Phakathi nendawo ngayinye sizokwenza ukuchotshozwa okujulile, sinciphise inyama engaphezu kuka 2/3 kokujula kocezu. Bese uvula i-halves elandelayo futhi kulokhu kuhlanganiswa sifaka ama-apula aqoshiwe, qala uhlanganise ama-apula noshukela, bese ugoqa ama-halves ndawonye. Ukuze bakwazi ukugcina, baphonsa ama-skewers abo noma bahlanganise intambo. I-salted kancane, i-peppered, izinongo azizisebenzisi, ungakhohlwa ngesikhathi esifanayo ukuthi ukunambitheka okuyinhloko kwenyama ngeke kuvela ku-seasonings no-pepper, kepha kusuka ema-apula.
Izingcezu zenyama ezigcwele ama-apula, sigqoka i-tray yokubhaka, okuyi-pre-oiled futhi ibhakwe kuhhavini. Kuthatha cishe imizuzu engama-30 noma engu-40, konke kuxhomeke kwikhwalithi yenyama kanye nobudala bayo. Uma inyama idliwe ngokweqile, ithululelwa ngejusi kusuka ema-apula noma ivele igaxa izingcezu zenyama ngo-juice kusuka kuma-apula.
Uma inyama ihlanganiswa ne-crust, phonsa ama-skewers noma izintambo ezibopha izinhlangothi zombili zombili, unqume inyama ibe yizicucu ezinezinhlangothi ezinezicucu kanye ne-cranberry-apula puree, bese kuthi eminye imizuzu eyishumi sizoyithumela kuhhavini.
Cabanga ukuthi ngenkathi inyama ibhakwa, iphunga elimnandi liqala ukuzungeza indlu, okuzoholela ekubukeni ekhishini lakho lamalungu omndeni ozoqala ukukuqinisekisa ukuthi inyama ilungile. Kodwa ungalaleli lawa mazwi, lokho okushisayo akulona okweqile, futhi kuqhubeka ukuvikela imizuzu engu-10. Ukuzivikela okungcono kakhulu ukuhlaselwa, ngakho-ke zama ukuphazamisa iphunga lenyama, cela umndeni wakho ukuthi ugubungele itafula, noma unikeze umsebenzi imizuzu eyishumi. ikhishi ngeke liphume, kungenjalo konke kuyodliwa, ngaphambi kokuba inyama ikhishwe emahheni abo.
Manje siyakwazi ukupheka inkambo yesibili yenyama. Zama ukusebenzisa lezi zokupheka ezilula, sithemba ukuthi uyabathanda. Bon appetit!
I-goulash yesiHungary yesi-Classic
Ingaphakathi elihle lokuhlala ekamelweni elilodwa
I-milk cocktail nge-mint
Ngidinga ukuxhumana nochwepheshe we-cosmetologist?
I-Vitamin isiphuzo sokuphila isikhathi eside
Ukunakekelwa ubuso emva kokukhishwa kwamakhemikhali
Indlela yokufundisa izingane ezingasebenzi kahle
Ababambe iqhaza kule phrojekthi "Dom-2" abalandeli abasondelene ngezimo zokuphila
Ungamisa kanjani kuye ngokuthanda komuntu?
Ukuphumelela kwesisindo ngokusiza kokudla ubisi
Indlela yokuba mnandi: iseluleko esilula kodwa esisebenzayo
Isimo sezulu sithini eSochi ngoJulayi 2016? Ukushisa okujwayelekile kweSochi, amanzi nomoya, ngokusho kokubikezela nokubuyekezwa
Intukuthelo, ifakwe endaweni yokubilisa
Santa ngendodana yakho ethandekayo